Imithetho emi-5 yegolide yokudala iifonti | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Izolo besiphawula izixhobo eziyimfuneko ukwenza iifonti yakhoEwe, namhlanje kuyinto encinci ukuyazi ithini imithetho emi-5 yegolide ukwenza iifonti ezimangalisayo.
Ngokucinga ngokungathi singumyili womshicileli, inokusinceda siphucule izakhono zethu xa sisenza eyethu typography. Apha ngezantsi uyakufumana imithetho emi-5 yegolide esele ikho icetyiswe ngabaqulunqi beengcali ukwenza iifonti eziphume ecaleni kwabanye kwaye zikwenze ugqame ngokunika umsebenzi omkhulu kuzo.
1 Ukuba semthethweni nokungaguquguquki
2 Musa ukudibanisa kuba
3 Ubuntu bakho
4 Sebenza ungayeki
5 Umxholo ubalulekile
Ukuba semthethweni nokungaguquguquki
UHagen Verleges uyachaza: «Eyona njongo yam iphambili zizinto ezimbini. Eyokuqala, ukuba semthethweni koonobumba kunye nokukwazi ukufundwa ngokupheleleyo. Isibini, ukudibana kwifom kunye nomxholo. Ndisebenzisa imigaqo esisiseko yohlobo oluqhelekileyo lokuchwetheza, emva koko ndihlule ngokwahlukeneyo ngeenguqu ezahlukeneyo kunye nokujija«.
Musa ukudibanisa kuba
UBob Young weAlfabhethi ukholelwa ukuba mnye umthetho ophambili xa ufuna ukwenza umxholo wokuyila, yiyo loo nto ungaze udibanise ngaphezu kwezine izimbo kunye nobukhulu beleta kwiphepha.
UVeronica Ditting, uMlawuli oBalaseleyo woMntu wezoBugcisa ucebisa: «Anditsaleleki koonobumba abaqhelekileyo kwaye abafanayo bayile baphindaphindwe, ukuyifumana inomdla ngakumbi ekusebenzeni neeleta zakudala kodwa ngendlela eyahlukileyo. Ekugqibeleni, ukukhetha ileta kukukhetha kwakho, ukuba nje ilandela isiqubulo somxholo ngokwawo weprojekthi«.
UVince Frost uthatha njengesilumkiso: «yenza umhleli kunye nababhali ikunike umbono ngokubanzi kuwo wonke umxholoKe unokucinga ngeyona ndlela ibalaseleyo yokubalisa ibali ngalinye. Fumana ifonti eyahlukileyo okanye usapho lwefonti, kwaye uphuhlise oluhambelana kodwa usonwabile kuhambo lwakho lokudala. Sebenza kumthombo de ube uyazi ukuba le nto ubuyifuna iyenzeka«.
«Izifundo ezahlukeneyo zomcimbi zisikhokelela kwilogic eyahlukileyo kwimithombo esifuna ukuyenzaOselula uyacacisa. «Akukho sizathu sokuyila into ekhangeleka intle ukuba awunxibelelanisi into oyifunayo. Inqanaba lomxholo linokutshintsha ngokuxhomekeka kwimeko yeemvakalelo zomdali. Ayitshintshi intsingiselo yoyilo ngokuyilayisha ngaphezulu okanye yenze kubonakale ngathi kugcwalisa indawo engenanto«.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Imithetho emi-5 yegolide yokwenza iifonti ezimangalisayo
Phew! Leliphi icebiso ...